September 18, 2021 - Achawlaymyar
လာမည့်တနင်္လာနေ့တွင် သရုပ်ဆောင်ရဲထိုက်ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးတော့မည်
September 18, 2021 by Achawlaymyar
သရုပ်​ဆောင် ရဲတိုက်ကို စစ်​ကောင်စီ မှ ပုဒ်မ (၅၀၅-က)ဖြင့် ဧပရယ် လ အတွင်းက ဖမ်းဆီး ထားခဲ့ပြီး ထိုသို့ ဖမ်းဆီးချိန်တွင် စိတ်ကြွ​ဆေးပြား​တွေ့ရှိသည်ဟု ဆိုကာ မူးယစ်ပုဒ်မ ၁၆ (ဂ) နဲ့ပါ ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံထားရခြင်း ဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကို အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံးမှာ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ စတင်စစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်လို့ အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေကပြောပါသည်။ သရုပ်​ဆောင် ရဲတိုက်သည် ​တော်လှန်​ရေး အစပိုင်းတွင် ​​ရှေ့ဆုံး ဒိုင်းကာ အဖွဲ့မှာ အမြဲ လိုလို ဦး​ဆောင် ပါဝင်ခဲ့သူ တ​ယောက်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာ အင်တာဗျူးတခုတွင် စစ်​ ကောင်စီကို တိုက်ခိုက်တဲ့ စကား​တွေ ​ဖြေကြားခဲ့လို့ နိုင်ငံ​တော်အကြည်ညို ပျက်​စေမှုနဲ့ စစ်​ကောင်စီက ဖမ်းခဲ့တာ လို့ … Read more
ဒေါ်လာဈေး စံချိန်တင်မြင့်တက်နေရသည့် အကြောင်းအရင်း ဗဟိုဘဏ်ရှင်းလင်း
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၄၀ ကျော်ထုတ်ရောင်းထားပေမဲ့ ဒေါ်လာဈေး စံချိန်တင်မြင့်တက်နေရသည့်အကြောင်းအရင်း ဗဟိုဘဏ်ရှင်းလင်းချက် ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ စက်တင်ဘာလထဲ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃သန်းကို ထုတ်ရောင်းထားပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်မှစက်တင်ဘာ ၁၅ရက်အထိ ၇လခွဲတာကာလအတွင်း စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၄၄ ဒသမ ၈ သန်း ထုတ်ရောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်က စက်တင်ဘာလအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅သန်းတစ်ကြိမ်၊ ၈သန်းတစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀ကျော်ကို ပျှမ်းမျှငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းထားသည် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၇၅၀ကျပ်ဖြင့်ထုတ်ရောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ငွေလဲကောင်တာများတွင်ပင်လျှင် ၁ဒေါ်လာ ၁၉၅၀ကျပ်ဝန်းကျင်ထိဈေးပေါက်နေရာ ဗဟိုဘဏ်ကဈေးကွက်ကိုမထိန်းဘဲ ဈေးတက်အောင်တမင်ဆွဲခေါ်နေသလားဆိုသည့် ထင်မြင်ချက်များပါရှိလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာ၍ဈေးကွက်အတွင်းနိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ဝယ်ယူရသောပစ္စည်းများ ဈေးအဆမတန်မြင့်တက်လာခြင်း၊ကုန်ပစ္စည်းများဈေးနှုန်းမြင့်လာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များဈေးတက်လာမှုတို့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ဒေါ်လာဈေးတက်သည့်အပေါ် ဗဟိုဘဏ်က ”အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်း မြင့်တက်ရသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာနိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက် (ဘဏ်အချင်းချင်းနှင့် ဘဏ်နှင့် ၎င်း၏ customer တို့အကြားရောင်းဝယ်သည့်ဈေးကွက်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ … Read more
ယနေ့ မုံရွာအချဉ်ပေါင်းသည် မတင်တင်အေး ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
မုံရွာမြို့မှာ အချဉ်ပေါင်းသည်အန်တီကြီး ဒုတိယအကြိမ်ဖမ်းဆီးခံရ၊အကြမ်းဖက်စစ်သူပုန်အုပ်စုမှ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့မှာ အချဉ်ပေါင်းသည်အန်တီကြီး မတင်တင်အေး ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ စက်တင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ ညနေ၅နာရီဝန်းကျင်မှာ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ မတင်တင်အေး၏ညီမဖြစ်သူ အသီးဆိုင်ရှေ့မှာ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်သွားတယ်လို့ အချဉ်ပေါင်းသည်အန်တီကြီး၏နီးစပ်သူမိသားစုဝင်များကRNAကိုပြောပါတယ်။ အချဉ်ပေါင်းသည်အန်တီကြီး မတင်တင်အေးဟာ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ သပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစတင်ဖြိုခွဲရာ ဖေဖော်ဝါရီ၂၇ရက်နေ့ပြသာဒ်ကျောင်းအနီးမှာ ပထမ အကြိမ်ဖမ်းဆီးခံရသူတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ မုံရွာမြို့ ဒေါင်းကျောင်းရှေ့ ပန်းရောင်းသည့်စျေးသည်လင်မယားနှစ်ဦးနှင့်အချဉ်ပေါင်းသည်အန်တီကြီး မတင် တင်အေးတို့နှစ်ဦးကို အရပ်ဝတ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ———— မုံ႐ြာၿမိဳ႕မွာ အခ်ဥ္ေပါင္းသည္အန္တီႀကီး ဒုတိယအႀကိမ္ဖမ္းဆီးခံရ၊အၾကမ္းဖက္စစ္သူပုန္အုပ္စုမွ အရပ္ဝတ္ေတြနဲ႔ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမုံ႐ြာၿမိဳ႕မွာ အခ်ဥ္ေပါင္းသည္အန္တီႀကီး မတင္တင္ေအး ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံဖမ္းဆီးခံလိုက္ရပါတယ္။ စက္တင္ဘာ၁၈ရက္ေန႔ ညေန၅နာရီဝန္းက်င္မွာ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္မွ မတင္တင္ေအး၏ညီမျဖစ္သူ အသီးဆိုင္ေရွ႕မွာ အရပ္ဝတ္ေတြနဲ႔လာေရာက္ဖမ္းဆီးေခၚေ ဆာင္သြားတယ္လို႔ အခ်ဥ္ေပါင္းသည္အန္တီႀကီး၏နီးစပ္သူမိသားစုဝင္မ်ားကRNAကိုေျပာပါတယ္။ အခ်ဥ္ေပါင္းသည္အန္တီႀကီး မတင္တင္ေအးဟာ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္မွ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကိုစတင္ၿဖိဳခြဲရာ … Read more
အချစ်ကို စိတ်ကုန်သွားပြီ ဆိုတဲ့စကားက တကယ်ရှိပါတယ်….
အချစ်ကို စိတ်ကုန်သွားပြီ ဆိုတဲ့စကားက တကယ်ရှိပါတယ်….ħ အရင်က သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ တစ်ခါတစ်လေ ကြားရလေ့ရှိတယ် ငါတော့ အချစ်ကိုစိတ်ကုန်သွားပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်ချင်တော့ဘူး ချစ်ရမှာလဲကြောက်သွား ပြီး ဆိုတဲ့စကားမျိုးကြားရရင် နှာခေါင်းလေးရှုံ့ပြီး လျှာအရိုးမရှိတိုင်း လျှောက်ပြောမနေနဲ့ “ဆိုပြီး အပြစ်ပြောခဲ့ဖူးတယ် လူတိုင်းဟာ အချစ်နဲ့မှမကင်းနိုင်တာ အချစ်ကို စိတ်ကုန်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာဆိုပြီးတော့လဲ မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ဖူးတယ်နောက်တော့ ကိုယ်ကိုတိုင်ကြုံလာ ရမှ အော် သူတို့ပြောတာဟုတ်ပါ့လား အချစ်က တကယ်စိတ်ကုန်ချင်စရာကြီး ဘဲငါလဲ အချစ်ကိုစိတ်ကုန်သွားပြီး ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး ဝင်လာ ခံစားလာရမှ တကယ်ရှိတယ် ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ရတာ ဒီစိတ်ကလဲ လူတိုင်းဆီမှာ မရှိတတ်ဖူး ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဆီမှာ ရှိလဲဆိုတော့ အချစ်တစ်ခုကို တစ်ကမ္ဘာထင်ခဲ့ဖူးသူတွေ အချစ်မခံရတဲ့သူတွေ အချစ်ကြောင့်နာနာ ကျင်ကျင်ခံစားဖူးတဲ့သူတွေ လိုက်လေ ပြေးလေဖြစ်နေတဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ ကြုံဖူးတဲ့သူတွေ ပလစ်ခံရဖူးတဲ့သူတွေဆီမှာ … Read more
နိုင်ငံ တ ကာ ရုပ်ရှင်ပွဲ တော် ဖွင့်ပွဲတစ်ခု မှာ ပွဲရဲ့ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူက အိန္ဒြာကျော် ဇင်ရဲ့နာမည်ပါတဲ့ အကျ—ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့
အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္ေတာ့ နိုင္ ငံတကာ႐ု ပ္ရွင္ပြဲ‌ေတ ာ္ဖြင့္ပြဲမွာ ဒါ ရိုက္တာျ ဖစ္သူကအိျႏၵာေက် ာ္ဇင္စာတန္းပါအကၤ်ီ၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုပရိတ္သတ္တစ္ဦးက အခုလိုေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။ဂုဏ္ယူပါတယ္အမေရ၊မအူဝဲႏွင့္သုသုတို႔ရဲ့What HappenedToTh eWolf႐ုပ္ရွင္ကား ႀကီးကလက္ရွိမွာေက်နပ္ဖြယ္ေ ကာင္းတဲ့Reviewေတြရရွိေနပါတယ္။ HollywoodမွာReview လုပ္ခံရတဲ့ပထ မဆုံး ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္သြားသလိုအဓိကမင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့မအူဝဲကလည္းEaindraKyawZin စာတန္းပါအ ကၤ်ီႏွင့္ဂုဏ္ျပဳခံရတဲ့ပထမဆုံးမင္းသမီးျဖစ္လာပါတယ္။OldenburgInternation alFilmFe tival႐ုပ္ရွ င္ပြဲေ တာ္ဖြင့္ပြဲအခမ္ းအနားမွာFestivalDirectorျဖ စ္တဲ့TorstenNeumannအပါအဝင္ တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားကEaindraKyawZinစာတန္းပါအကၤ်ီကိုဝတ္ဆင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အမရယ္လူကသာေထာင္ထဲမွာအမတို႔ရဲ့ႀကိဳ းစာ းျပခဲ့မူေ တြကျမန္မာေတြ အတြက္ အလကားေ နရင္းဂုဏ္ယူေ နရျပန္ၿပီဆိုၿပီးေရးသား ထားပါတယ္၊ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္။ klcelenews အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္ေတာ့ နိုင္ ငံတကာ႐ု ပ္ရွင္ပြဲ‌ေတ ာ္ဖြင့္ပြဲမွာ ဒါ ရိုက္တာျ ဖစ္သူကအိျႏၵာေက် ာ္ဇင္စာတန္းပါအကၤ်ီ၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုပရိတ္သတ္တစ္ဦးက အခုလိုေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။ဂုဏ္ယူပါတယ္အမေရ၊မအူဝဲႏွင့္သုသုတို႔ရဲ့What HappenedToTh eWolf႐ုပ္ရွင္ကား ႀကီးကလက္ရွိမွာေက်နပ္ဖြယ္ေ ကာင္းတဲ့Reviewေတြရရွိေနပါတယ္။ HollywoodမွာReviewလုပ္ခံရတဲ့ပထမဆုံး ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္သြားသလိုအဓိကမင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့မအူဝဲကလ ည္းEaindraKyawZin … Read more
အိန္ဒိယလူမျိုးတို့၏ သဘာဝယောကျ်ားအားတိုးဆေး(များစွာ စားပါက နှိမ်မရအောင်ဖြစ်တတ်၍ သင့်တော်ရုံစားလေ)
အိန္ဒိယလူမျိုးတို့၏ သဘာဝယောကျ်ားအားတိုးဆေး(များစွာ စားပါက နှိမ်မရအောင်ဖြစ်တတ်၍ သင့်တော်ရုံစားလေ) အိန္ဒိယလူမျိုးတို့၏ ယောကျ်ားအားတိုးဆေးကြက်သွန်နီဥကြီး တစ်လုံးကို အရည်ညှစ်ပါ။ ယင်းအရည်(၁)ဆလျှင် ပျားရည်စစ်စစ်(၂)ဆ ရောပြီး မီးငွေ့ငွေ့ဖြင့် တည်ရပါသည်။ကြက်သွန်နီအရည်များ ခန်း၍ ပျားရည်သက်သက် ကျန်ပါလျင် ကျန်သော ပျားရည်၏ (၃)ဆမျှရှိသော ရေနှင့်ရော၍ ကုလားပဲတော်သင့်ရုံမျှ ထိုရေတွင်(၂၄နာရီကြာအောင် စိမ်ရပါမည်။ ဆေးညွှန်းတွင် များစွာစားပါက နှိမ်မရအောင်ဖြစ်တတ်၍ သင့်တော်ရုံစားလေဟု ဆိုပါသည်။ယင်းဆေးနည်းမှာ အိန္ဒိယလူမျိုးတို့၏နည်း ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကျမ်းစာကိုး။ ကျိုက္ခမီ အရှင်ဣန္ဒာစက္က၏ အထွေထွေဆေးနည်းကျော်များ စာအုပ်မှထုတ်နုတ်ပါသည်။လိုသူတို့ သုံးနိုင်ပါရန် စေတနာဖြင့် ထုတ်နုတ်တင်ပြအပ်ပါသည်။ Credit -ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်) အိႏၵိယလူမ်ိဳးတို႔၏ သဘာဝေယာက်္ားအားတိုးေဆး(မ်ားစြာ စားပါက ႏွိမ္မရေအာင္ျဖစ္တတ္၍ သင့္ေတာ္႐ုံစားေလ) အိႏၵိယလူမ်ိဳးတို႔၏ ေယာက်္ားအားတိုးေဆးၾကက္သြန္နီဥႀကီး တစ္လုံးကို အရည္ညႇစ္ပါ။ ယင္းအရည္(၁)ဆလွ်င္ ပ်ားရည္စစ္စစ္(၂)ဆ ေရာၿပီး မီးေငြ႕ေငြ႕ျဖင့္ တည္ရပါသည္။ၾကက္သြန္နီအရည္မ်ား … Read more
မိခင္ေမတၱာ ငတ္မြတ္ေနေသာ သနားစရာ က်ားေပါက္ေလးေတြအတြက္ မိခင္ရင္းခ်ာလို အစားထိုးကာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည့္ ေခြးလိမ္မာေလး
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုတြင္ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေခြးေလးတစ္ေကာင္သည္ သနားစရာ က်ားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ မိခင္ရင္းခ်ာလို ျဖစ္လာခဲ့သည္။ က်ားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ မိခင္ရင္းမွာ ေမြးေမြးၿပီးခ်င္း ကိုယ့္ကေလးကိုလည္း ခ်စ္ခင္တြယ္တာျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ႏို႔လည္းမတိုက္ပဲ အနားကပ္လာသည္ႏွင့္ ေမာင္းထုတ္ေနခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ တိရစာၦန္႐ုံ ဝန္ထမ္းအေစာင့္မ်ားမွာ ငယ္ငယ္ေလးတည္းက ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ေသာ ေခြးလိမ္မာေလးကို သတိရၿပီး က်ားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ မိခင္အျဖစ္ အစားထိုးေပးခဲ့သည္။ ေခြးေလးသည္ သူ႔ရဲ႕ကေလးမဟုတ္မွန္း သိေနေသာ္လည္း ရန္မူျခင္းမရွိပဲ က်ားေပါက္ေလးေတြကို သနားမိကာ ႏို႔တိုက္ေကြၽးခဲ့ၿပီး သားသမီးရင္းလို ဂ႐ုစိုက္ေပးခဲ့သည္။ Rain (For Ialinks) Unicode မိခင်မေတ္တာ ငတ်မွတ်နေသော သနားစရာ ကျားပေါက်လေးတွေအတွက် မိခင်ရင်းချာလို အစားထိုးကာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည့် ခွေးလိမ်မာလေး တရုတ်နိုင်ငံ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဥ်တစ်ခုတွင် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားသော ခွေးလေးတစ်ကောင်သည် သနားစရာ ကျားပေါက်လေးတွေရဲ့ မိခင်ရင်းချာလို ဖြစ်လာခဲ့သည်။ … Read more
မိန်းခလေးတစ်ဦးကို ပစ္စည်းလဲယူ၊ လည်လှီးပြီးသတ်သွားတဲ့သူကို လူအုပ်ကြီးကမကျေနပ်လို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်(ရုပ်သံ)
မိန်းခလေးတစ်ဦးကို ပစ္စည်းလဲယူ၊ လည်လှီးပြီးသတ်သွားတဲ့သူကို လူအုပ်ကြီးကမကျေနပ်လို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်(ရုပ်သံ) ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွား ထိုင်းရဲတွေက စက်ရုံအလုပ်သမားမိန်းကလေးတစ်ဦးကို ပစ္စည်းလဲယူ၊ လူကိုလဲလည်လှီးသတ်သွားတဲ့ အသက် ၅၀ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိ ထိုင်းအမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းခေါ်လာစဉ်မှာ အခဲမကြေဖြစ်တဲ့ လူအုပ်စုကြီးက လူသတ်သမားကို ထိုးကြိတ်ဖို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားတဲ့ ရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက ထိုင်းနိုင်ငံ ရယောင်းခရိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအုပ်စုကြီးကို ထိုင်းရဲတွေက အချိန်မီတားဆီးနိုင်ခဲ့လို့ တရားခံကဘာမှမဖြစ်သွားခဲ့ပါဘူး။ ဝင်တားတဲ့နေရာမှာ ရဲအင်းအား ၁၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ credit zawgyi မိန္းခေလးတစ္ဦးကို ပစၥည္းလဲယူ၊ လည္လွီးၿပီးသတ္သြားတဲ့သူကို လူအုပ္ႀကီးကမေက်နပ္လို႔ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္(႐ုပ္သံ) ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြား ထိုင္းရဲေတြက စက္႐ုံအလုပ္သမားမိန္းကေလးတစ္ဦးကို ပစၥည္းလဲယူ၊ လူကိုလဲလည္လွီးသတ္သြားတဲ့ အသက္ ၅၀ ႏွစ္ဝန္းက်င္ရွိ ထိုင္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ဖမ္းေခၚလာစဥ္မွာ အခဲမေၾကျဖစ္တဲ့ လူအုပ္စုႀကီးက လူသတ္သမားကို ထိုးႀကိတ္ဖို႔ … Read more
မိုးရေဒဏ်ခံနေရသည့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ပုဂံဘုရားများ ….
မိုးရေဒဏ်ခံနေရသည့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ပုဂံဘုရားများ ဧရာဝတီ၊ စက်တင်ဘာ ၁၈၊၂၀၂၁ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒေသ ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေအတွင်း ယခုရက်ပိုင်း မိုးများစွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရှေးဟောင်းဘုရားများ၏ ပရိဝုဏ်နှင့် ပရိဝုဏ်အနီး ရေများတင်ကျန်နေပြီး အမွေအနှစ်များအတွက် စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေ ဖြစ်နေသည်။ ဘုရားပရိဝုဏ်ထဲရှိ ရေများကို မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် စွန့်ထုတ်ကြရန် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ချစ်မြတ်နိုးသူများနှင့် အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်များက တိုက်တွန်းလျက် ရှိသည်။ ထို့ပြင် ရေစိမ့်၊ ရေဝင်၊ ရေနူးသည့် ဒဏ်များကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိသော ပုဂံရှေးဟောင်းဘုရားများတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ် ၃၁ ရက်နေ့က မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဘုရားအမှတ် (၁၀၈) သံပျင်စွာဘုရား၏ တောင်ဘက် တိုက်မနံရံ ပြိုကျမှု … Read more
လင်မယားဆိုတာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကျေးဇူးရှိတယ်
လင်မယားဆိုတာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကျေးဇူးရှိတယ် ယောက်ျား ယူပီးမှ အမျိုးသမီးက အပျိုတုန်းကထက် ပိုလှနေတယ် ၊ ပိုပီးတင့်တယ်နေတယ် ဆိုရင် အဲဒီ အမျိုးသမီးဟာ လင်ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ လို့ ဆိုကြတယ် ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အမျိုးသားဟာ လူပျို ဘဝတုန်းကထက် ပိုပြီး ခန့် ညား တင့်တယ်နေတယ် ဆိုရင် သူဟာ ဇနီးကောင်းကို ရရှိထားလို့ လို့ ဆိုကြပါတယ် ။ အပျို လူပျို ဘဝမှာထက် ပိုပြီး တင့်တယ်နေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေ ကတော့ ရှေးရေစက်ကြောင့် ဆုံရတဲ့ စုံတွဲ၊ ကောင်းမှု ကုသိုလ် အတူတူပြုဖို့ နတ်ဖက်တဲ့ အတွဲ လို့လည်း ဆိုကြ ပြန်တယ် ။ အဲဒီ အဆိုတွေကို … Read more